(49) Superbe villa, Piscine CHAUFFEE/Imperar Shemsi - I-Airbnb
(49) Superbe villa, Piscine CHAUFFEE/Imperar Shemsi
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLuc
Indlu enendawo yokuphola esemagqabini enepuli yokuqubha yabucala, kwindawo ekhuselekileyo ye-Orange grove eFlorida Shemsi. Uza kuba nendawo etofotofo nezinto onokuzisebenzisa ezipheleleyo. Ikwafumaneka nakwindawo yokutyela, indawo yokutyela, i-spa, i-tennis, indawo yokudlala igalufa, indawo yokupaka, indawo yokujima notitshala (intlawulo eyongezelelweyo kwisayithi ) ipuli ephakathi njl njl.
Le ndawo ikwiikhilomitha eziyi-35 ukusuka eAgadir nakwiilwandle zayo (ufikelela ngqo kwi-Agadir/ eMarrakech)kunye neekhilomitha eziyi-25 ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya.
Ingcamango yale domeyini ibaluleke kakhulu kwaye yanamhlanje, ngamagama ayintloko athi " ingingqi kunye nobuhlobo". Inezindlu ezinendawo yokuphola ezizimeleyo kunye neegadi ezintle ezijikelezwe ziindonga, njengoko unokubona kwiifoto. Ukujikelezwa ziindonga akuthethi kuthi ujikelezwe ziindonga…………..!
Ngoko kungenzeka ukuba ngelo xesha okanye ngelinye ixesha, kuxhomekeka kutshintsho lwezityalo, umntu unokubona, nkqu nokuqikelela kuphela, ngothango. Ngenxa yoku, le ndawo ayihambelani nabantu abangenayo i-visa-à-vis yeyona nto ibalulekileyo nokugxekayo.